धितोपत्रको दोस्रो बजारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य भएपछि ५ लाखभन्दा माथिको कारोबारमा कमी आएको भए पनि समग्र सेयर बजार भने सकारात्मक नै देखिएको छ । प्यान लागू गरिएपछि सेयर बजार परिसूचक पनि निरन्तर सुधारको गतिमा देखिएको छ । प्यान लागू भए पनि बजार झनै प्यानिक हुने मनोविज्ञानले लगानीकर्तालाई सताएको भए पनि वास्तविकता भने उल्टो देखियो । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला लगानीकर्ता भने उत्साहित भएको देखिन्छ । लगानीकर्ताका संघ–संस्थाले पनि धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल सबैलाई अनिवार्य गरेर धेरै लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिन सक्ने भनेपछि ५ लाखको व्यवस्था भएको हो । वैशाख २ गते सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ५ लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार ५६ पटक भएको थियो । ५ लाखभन्दा कम रकमको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता पनि स्वेच्छिक रूपमा प्यानमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताको सानो हिस्सालाई मात्र प्यान अनिवार्य हुने देखिएपछि लगानीकर्तामा देखिएको करको डर हटेको हो । प्यानको विषयलाई लिएर सेयर बजारमा फैलाइएको हाउगुजीबाट लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था समाप्त भएको छ । गत सोमबारसम्ममा प्यानमा आबद्ध हुने लगानीकर्ताको संख्या १४ हजार ५३ पुगेको छ । स्वेच्छिक रूपमा प्यानमा आबद्ध हुने लगानीकर्तासमेत गरी यो संख्यामा लगानीकर्ताको आबद्धता देखिएको हो । वैशाख १ गतेदेखि ५ लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेपछि प्यानमा आबद्ध हुने लगानीकर्ताको संख्या भने बढ्दै गएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागसँग नेप्से तथा सेयर दलालको प्रणाली भने इन्टिग्रेट गरिएको छैन, जसले गर्दा प्यान लागू हुने गरी भएको कारोबारको प्रणालीमा कर गणना भने हुन सकेको छैन । हाम्रो करप्रणालीमा सेवाग्राही आफैं कर कार्यालय गएर घचघच्याएर कर तिर्नुपरिरहेको अवस्थामा ५ लाखभन्दा बढी रकमको कारोबारमा अहिले नै कर लाग्ने अवस्था पनि देखिन्न । नेप्सेले पनि प्यानमा आबद्ध हुनका लागि लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित मात्र गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्यानका कारण ठूलो रकमको कारोबारमा देखिएको कमी तथा लगानीकर्तामा करको मनोविज्ञानले पारेको असरका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
प्यानसँग लगानीकर्ता डराउनुपर्ने नै छैन
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्यानको विषयलाई लिएर धेरै हाउगुजी बनाइयो । वास्तवमा यो नकारात्मक विश्लेषण धेरै भएर पनि हो । सेयर बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्यान लागू गर्नु आवश्यक पनि हो । यसभन्दा अघि पनि १० लाखभन्दा धेरैको साधारणसेयरमा आवेदन दिँदा समेत प्यान अनिवार्य थियो । प्यानसहित आवेदन बुझाएका नै थिए त । त्यसका साथै दोस्रो बजारमा प्यान लागू भएपछि बजारले नकारात्मक प्रतिक्रिया त जनाएन नि !
प्यान सबैलाई अहिले नै अनिवार्य गर्दा गाउँगाउँमा साधारण सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ता छन् । तिनीहरूले १० कित्ता सेयर पारेका छन् । त्यो १० कित्ता सेयर बिक्री गर्नका लागि प्यान अनिवार्य गर्दा प्यान लिन आउनका लागि नै दुई दिनसम्म लाग्ने अवस्था छ । त्यसैले ती लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार बनाउन तयार भएको खण्डमा, अनिवार्य गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले दोस्रो बजारमा प्यान अनिवार्य गरिनु उपयुक्त समय होइन भन्नु गलत हो भन्ने लाग्छ । बजारमा कुनै पनि नयाँ कुरा आउँदा हतार भयो, केही समय कुर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा भइरहन्छन् । तर, जहिले सुरु गरे पनि यो भन्ने कुरा रोकिँदैन । त्यसैले जहिले सुरु भयो, त्यही समय उपयुक्त हो । बजार व्यवस्थित गर्नका लागि सुरु हुने नयाँ कुरा जुनसुकै समयमा आएको भए पनि उपयुक्त नै हुन्छ भन्नुपर्छ ।
कुनै कम्पनी खोलेर सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्यानसँग कुनै समस्या नभएका लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सन्दर्भमा प्यान लागू हँुदा समस्या हुनुपर्ने नै होइन । समग्र बजार तथा लगानीकर्ताको पक्षमा भएका नीतिगत सुधारलाई स्वीकार गरेर सुधारलाई स्वीकार गर्नु नै बजारका लागि हितकर हुन्छ ।
सेयर बजारमा कालोधन नियन्त्रण गर्नका लागि प्यान लगाइएको भन्ने कुरा गलतजस्तो लाग्छ । सेयर बजारमा हुने कारोबार सबै बैंकिङ कारोबार नै हो । बैंकिङ कारोबार हुने भए पनि कालोधन कसरी आउन सम्भव छ । कालोधन आउने माध्यम बन्द भयो भने प्यान लागू भएपछि बजार किन यसरी सुधारको गतिमा देखियो त ? त्यसैले बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु भएको प्यानसँग लगानीकर्ता डराउनुपर्ने नै छैन । प्यानको विषयलाई लिएर बजार हल्ला गरेर बजारलाई चलाउन खोज्नु वा प्रभावित पार्न खोज्नु गलत हो ।
प्यान लगाउँदैमा कालोधन नियन्त्रण हुन्छ भन्नु गलत
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजारमा कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गराउन नपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको छ । बोर्डले मन्त्रालयको निर्देशन पाएपछि तत्काल लागू नगरी सेयर बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेर २०७६ वैशाख १ गतेदखि ५ लाखभन्दा माथिको सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले पनि आफ्ना विषयहरू राखेको थियो । सरकार तथा धितोपत्र बजारको नियामक निकायले प्यान लगाउनुभन्दा अघि सेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्यानसम्बन्धी चेतना दिलाएर अनिवार्य गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसका साथै कुनै एक क्षेत्र मात्र नभई देशभर आवश्यक व्यवस्था गरेर लागू गरेको भए उपयुक्त हुने तथा कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ । त्यसका साथै विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीले पनि लगानी गर्ने उपयुक्त व्यवस्था गरेर प्यानको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्यानका कारण विदेश गएका नेपाली सेयर बजारमा लगानी गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।
धितोपत्र बोर्डले प्यान लागू गर्दा एक दिनमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर खरिद गरेको खण्डमा अनिवार्य हुने भनेको छ । बिक्री गर्दा प्यान नचाहिने हो भने धितोपत्र बजार झनै समस्यामा हुन्छ । बिक्री गरेर भाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले सेयर खरिद वा बिक्री दुवैमा प्यान अनिवार्य हुनुपर्छ ।
सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि अनिवार्य गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले नै प्यान लिएका छैनन् । सेयर बजारका लगानीकर्ताले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन । त्यसका साथै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई समेत शुल्क बुझाउँछन् । प्यान लगाउने सन्दर्भमा इन्भेस्टर्स फोरमले विरोध गरेको होइन । प्यान लगाउनुपर्छ र त्यसका लागि सबैलाई सचेत गराउनु जरुरी हुन्छ ।
सेयर बजारका साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी कुनै पनि नीति–नियम ल्याउनु हुँदैन । भोलिका ठूला लगानीकर्ता भनेका आजका साना तथा मझौला लगानीकर्ता नै हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई बजारमा बचाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले तिर्ने ७.५ अन्तिम कर भनिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत लाभ करमा वृद्धि ग-यो, लगानीकर्ताले त्यसको विरोध गरेनन् । तर, त्यो नै अन्तिम कर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
प्यान लागू भएपछि बजार के हुने हो भनेर लगानीकर्ताले निर्णय गर्न नसकेको अवस्था थियो । तर, ५ लाखभन्दा कम गर्दा धेरै लगानीकर्ता सकारात्मक भए । त्यसले बजारलाई खासै असर पनि गरेन । भोलिका दिन सबैलाई प्यान अनिवार्य हुन्छ-हुँदैन त्यो भन्न सकिँदैन । तर, साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई प्यान अनिवार्य गरिए धेरै लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिन्छन् । अहिले देशका कुना–कुनाबाट सेयरको आवेदन आउने गरेको छ । त्यसलाई सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गथ्र्यो भन्ने योजनाबिना नै प्यान लागू गरेको देखिन्छ ।
सेयर बजारमा हुने आर्थिक कारोबार पनि बैंकमार्फत नै हुन्छ । धितोपत्र ब्रोकरले सेयर बिक्री गरेबापत लगानीकर्तालाई चेक दिन्छ भने खरिद गराएको खण्डमा पनि चेक नै लिने गर्छन् । सेयरको कारोबार पूर्ण रूपमा बैंकिङ च्यानलमार्फत हुने भएकाले कालोधन आउने भन्ने सम्भावना नै छैन, तर पनि सरकारलाई सेयर बजारमा कालो धन आएको शंका लागेको खण्डमा जुनसुकै समयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यसैले प्यान लगाउँदैमा कालोधन नियन्त्रण हुन्छ भन्नु गलत हो । बजारमा कालोधन आउन नगदमा सेयरको कारोबार हुनुपर्छ । त्यो सम्भव नै छैन ।
पूर्वतयारी विनै लागू गरियो
सेयर बजारलाई तलमाथि गर्न भनेर प्यानको प्रोपोगान्डा सुरु गरिएको हो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेर लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा प्यान अनिवार्य गराएर बजारको सुधारका लागि हो भन्न मिल्दैन । हामी नेपालीहरू कर भनेपछि डराउँछांै । कर भनेको नकारात्मक रूपमा मात्रै लिने सोचलाई सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूले परवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई प्यानका विषयमा सुसूचित गरेर पछि लागू गर्न सेयर लगानीकर्ता संघले भनेकै हो । तर पनि सरकारले हतार गरेर तानाशाही शैलीमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजारमा सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको प्यान अनिवार्य भनेपछि घट्न थालेको थियो । सेयर लगानीकर्ताले खरिदकर्ताका लागि मात्र प्यान अनिवार्य गर्न नहुने भनेर संघर्ष नै गरेको अवस्था हो । खरिदकर्ताका लागि सबै लगानीकर्तालाई अनिवार्य गरिएको भए सेयर बजार क्र्यास हुन्थ्यो । सरकारले बजारलाई गम्भीर रूपमा नलिएको हुनाले लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर भएको हो । सरकारले प्यान भ्याटजस्ता विषयहरूलाई बजार घटाउने र बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्यान लगाउँदा लगानीकर्तालाई घाटा हुन्छ भन्ने छ । राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने हो भने सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र लागू गर्नुपर्छ ।
खरिददाताले अनिवार्य रूपमा प्यानमा दर्ता भएको हुनुपर्ने भनेको छ । यसले बजारलाई थप घटाउन मद्दत गरेको छ । जिल्ला–जिल्लाहरूमा यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? पूर्वतयारी नै नगरी बजारलाई तलमाथि गर्ने खालको नीति लिने विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू पनि सोच्नुपर्छ ।
कुनै पनि नीति सेयर बजार सूचक घटाउन वा बढाउन भनेर निर्माण गर्ने होइन । नीति बनाउँदा समग्र बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ । सरकारले तानाशाही प्रवृत्तिमा निर्णय गर्नु भएन भन्ने मात्र हाम्रो तर्क हो । बजारलाई तथा लगानीकर्ताको मनोबललाई तलमाथि गर्ने खालका नीति ल्याउँदा विज्ञ समूहसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर उपयुक्त सुझावअनुसार जानुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको भनाइ हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको ५ लाखभन्दा थोरैको सेयर कारोबार प्यान आवश्यक नहुने व्यवस्थाका लागि पनि लगानीकर्ताले ठूलै संघर्ष गर्नुप-यो । यदि यो व्यवस्था नगरेको भए सेयर बजार क्र्यास नै हुने अवस्थामा पुगेको थियो । १० कित्ता सेयर खरिद गर्दा पनि प्यान आवश्यक भनेर नीति ल्याउने, तर सरकारले लगानीकर्ताले चाहेको समयमा प्यान दिन सक्षम छ कि छैन भनेर नहेर्ने । सबै लगानीकर्तालाई प्यान अनिवार्य गर्दा सरकारले प्यान दिन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? त्योअनुसारको पूर्वाधार सरकारले तयार गरेको थियो त ? त्यतिमात्र होइन, धितोपत्र बजारको नियामक निकायले प्यानका सन्दर्भमा कुनै सूचना प्रकाशित गरेर लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरेको अवस्था छैन । हामीले राज्यसँग झगडा गर्न खोजेको होइन । हामी सेयर लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न चाहेको समयमा प्यानका कारण खरिद गर्नबाट वञ्चित हुन भएन ।
सरकारले करिब एक वर्ष बित्न लागेको अवस्थामा समेत बोनस र हकप्रद सेयरको पुँजीगत लाभकरको विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । सेयर लगानीकर्ताले प्यानको विरोध गरेको होइन । जुन प्रक्रियाबाट पूर्वतयारीबिना नै लागू गरिएको छ, त्यसको विरोध गरेको हो ।